श्रीमान ! यो प्रतिगमन हो, सत्ताको जुठोपुरोको निवेदन दरपीठ गर्नुस् - श्रीमान ! यो प्रतिगमन हो, सत्ताको जुठोपुरोको निवेदन दरपीठ गर्नुस् -
उज्यालो प्रतिनिधि १२ माघ २०७७, सोमबार
श्रीमान, तपाईं बहसमा हुनुहुन्छ । तपाईंमात्र होइन यतिबेला सिङ्गो मुलुक बहसमा छ । चिया–चौतारा, मेला–जमघटदेखि तपाईं–हामीले मान्दै आएका बुद्धिजीवीहरुको जमात सम्म बहसमा छ । तपाईंको इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन कालो हो ? वा सेतो हो ? भन्ने बहस चल्दै होला । चेतनास्तर शून्य मानिएका हाम्रा ग्राम वस्तिहरुमा हामी भुइँमान्छेहरुको इजलासमा तपाईंको न्याय सेवा जीवनको बहस हुँदैछ । तपाईं संविधानका धारा–उपधाराहरुमा सदरदेखि बदरसम्मका दूरी नाप्दै हुनुहुन्छ होला । हामी तपाईंको विवेकी निर्णयले कायम हुने तपाईंको गरिमामय पद नाप्न फित्ता लिएर बसेका छौं ।
संसद विघटन भएको छ, या भएको छैन ? हुन मिल्छ या मिल्दैन ? यतिमात्रको बहसले अदालतको सर्वोच्चता रहन्छ भन्ने देखिँदैन् । हरेक क्रियाभित्र कारण हुन्छ्न । यो सामान्य नियम हो कारण सहित समस्याको निदान परिपक्व समाधान विधि हो । तपाईंले व्याख्या गर्नुपर्ने कानुनका वाक्यहरुमा पनि उल्लेखित होलान, के–के कारणले यो विघटन हुन सक्छ ? ती कारणका चरणहरुमाथी न्यायिक हिसाब गर्दै हुनुहुन्छ कि नाइँ ? यतिबेला तपाईं नगर्नु पर्ने बहस गर्न बाध्य हुनुभएको छ । परिस्थितिले तपाईंलाई त्यो निर्णय गर्नुपर्ने ठाउमा पुर्यायो, उप्रान्त गरिमामय अदलतबाट न्यायको आशा गर्ने कि नगर्ने ?
श्रीमान, तपाइँ राजनितिक मान्छे होइन, तर राजनिती बुझ्नु हुन्न जस्तो लाग्दैन । बुझ्नुहुन्न भने बुझ्नुस् । एकैछिन जनतापट्टि फर्किएर हेर्नुस, इतिहासपट्टि फर्कनुस । परिवर्तनका विभिन्न चरणहरुमा कानुनमा लेखिएका के–के भए ? नलेखिएका के–के भए ? कानुनले निशेध गरेको आन्दोलन, हामीले गर्यौं । कानुनले बन्देज लगाएको हतियार, हामिले उठायौं । कानुनले नमानेको जनयुद्ध, हामीले लड्यौं । कानुनले मानेको राजा, हामीले हटायौं । अनि स्मरण रहोस् अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईंकै संविधानले बन्देज लगएको अन्दोलनबाट स्थापित गरेको गरिमामय संविधानसभाबाट यो कानुनको निर्माण भएको हो । जसको ब्याख्याता बनेर तपाई यतिबेला यो सर्वोच्च स्थानमा विराजमान हुनुहुुन्छ । यो पनि हेक्का राख्नुस, तपाईंको सर्वोच्चता अदालतको गरिमाले कायम गर्छ । श्रीमान, तपाईं रहनु होला नरहनु होला, अदालत रहन्छ, यसको गरिमा रहनुपर्छ ।
मलाइ दुःख लागेको छ, बेलाबेला तपाईंलाई सम्झिएर भक्कनिन्छु । तपाईंको ओझको दुहाइ दिएर केही सत्ताधारीहरु खुलेआम ‘सेटिङ’का कुरा गर्छ्न । तपाईंको सर्वोच्चतालाई त्यो अलंकार पटक्कै सुहाएको लाग्दैन, श्रीमान । हल्ला हो या सत्य, मैले त खासै मान्दिँन । तपाईं मान्नुहुन्छ भने, त्यही भगवान भरोसा । तपाईंबाट सत्ताभित्रको जुठोपुरोको निवेदन ग्रहण भयो भन्ने हल्ला जनतामाझ आएको छ । म यो हल्लाको पछि लग्दिँन । आशा छ, तपाईंबाट ती हल्लाका निवेदनहरु दरपीठ हुनेछ्न । किनपनि भने, अदालतको यो गरिमा जनताको विश्वासले कायम भएको हो ।
आज तपाईंको इजलासभित्र चलिरहेको बहसबाट अदालतको गरिमा कायम रहन्छ ? कि रहदैन ? भन्ने बहस सुरु भएको छ, इजलास भित्रै । हिजो, आज तपाईं बसेकै कुर्सीमा बसेर सम्मानपूर्वक विदा लिएका तपाईंका अग्रज, आज तपाईंसङ बहस गरिरहेका समकक्षीहरुले आशंकापूर्ण भावले तपाईलाई सुझाइरहँदा, इजलासमा पेश भएका केही कागजी प्रमाणहरु हराएर धुँइपत्ताल खोजविन हुँदै गर्दा, सत्ताका प्रतिनिधि पात्रहरुले ‘सेटिङ’ का कुरा गर्दै गर्दा, सन्चारमाध्यमहरुले संवैधनिक नियुक्तिको ‘जुठोपुरो’मा तपाईंको नाम किटेर लेख्दै गर्दा अनि सडकमा तपाईंको विश्वासको खिलाफमा बहस हुँदैगर्दा तपाईंलाई चैनको निन्द्रा लग्छ, श्रीमान ? मलाई त यी सब सम्झेर रात–रातभरी एैठन हुन्छ । म फेरि पनि भन्छु, ईतिहास हेर्नुस् । श्रीमान अन्तिम फैसला जनताले गरेका छ्न । यही संविधानमा लेखिएको छ, नेपाली जनता सावैभौमसत्ता सम्पन्न छन् ।
तपाइँले प्रश्न गर्नु भएछ, ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैन !’
सक्ला नसक्ला, म बुबुरो किटान गर्न सक्दिँन ।
तर, आज तपाईंले भन्नुभएको बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतसिद्ध गर्न संसदमा पठाइबक्स्योस् । श्रीमान तपाईं आज इतिहासको विशिष्ठ परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, मुलुकलाई घटा भयो कि नाफा ? संविधान बाच्यो कि मर्यो त्यो पनि हिसाब त हुन्छ नै । तपाईंको निर्णय नजिरका रुपमा इतिहासमा लेखिने छ । तपाईंले भने जस्तो बहुमतको सरकारले ससंसद विघटन गर्न सक्छ भने, यही नजिरले बरम्बार मुलुकमा बहुमतका सरकारले अल्पायुमै जनमतको घाँटी निमोठिरहे भने मुलुक कहाँ पुग्ला ? अनि, अल्पमतका सरकारको अभ्यास कस्तो हुन्छ ? भोगेको हैनर ? साँच्चै तपाईं यतिबेला नेपालको राजनीतिलाई नयाँ कोर्समा लैजाने त्यो बिन्दु बन्नु भएको छ । जुन बिन्दुलाइ तपाइँ कालान्तरमा कसरी पुष्टि गर्नुहोला, त्यो तपाईं नै जन्नुहोस् । तर, नयाँ पुस्ताले इतिहासको कालो बिन्दुको रुपमा अध्ययन गर्नु पर्ने बाध्यकारी अवस्था नबनोस् ।
फेरि सुरु हुने अस्थिर राजनितिमा तपाईंको नाम बरम्बार उल्लेख नहोस् । बहुमतका प्रधानमन्त्रीले आज संसद भंग गरे, हजुरले ल्याप्चे लगाउनुहोला, त्यसपछि के होला ? हामी एउटा अस्थिर राजनीतिको खाल्डोमा जकिनेछौं । त्यो भनेको हामी लगभग पुनः साठीको दशकको राजनीतिक अभ्यासमा फर्कनु हो । पछाडी फर्कनु भनेको पश्चगमन हैन र ? श्रीमान ! तपाईंले भन्ने गरेको, मैले सुन्ने गरेको निर्वाचन अग्रगमन हो भने, संविधानले स्थायी सरकारको परिकल्पना किन गर्यो ? मान्छे विवेकशील प्राणी हुदाहुदै पनि कहिलेकाही भ्रममा पर्छ । तपाईंको विवेक भ्रममा नपरोस्, धोती खुस्किएर सर्वाङ्ग नाङो भएपछी खुलेको चेतले काम गर्दैन । बेलैमा सोची बक्सेला, श्रीमान !
प्रतिगमन भएकै हो, र प्रतिगमन कालै हुन्छ । कालो कोट लगाउनेहरुको मन सेतो हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । न्यायलमा परेको सत्ताको कालो छाया मेट्ने बेला आएको छ । ढिलो भयो, उठ्नुस् श्रीमान, यो प्रतिगमन हो । सत्ताको जुठोपुरोको निवेदन दरपीठ गर्नुस ।